Maxkamadda G/Hargeysa oo Xukunno Xadhig iyo Ganaax isugu jira Ku Ridday Dambiilayaal Dalka KHamri iyo Xashiishad soo geliyey | Berberanews.com
Home WARARKA Maxkamadda G/Hargeysa oo Xukunno Xadhig iyo Ganaax isugu jira Ku Ridday Dambiilayaal...
Maxkamadda G/Hargeysa oo Xukunno Xadhig iyo Ganaax isugu jira Ku Ridday Dambiilayaal Dalka KHamri iyo Xashiishad soo geliyey
Hargeysa-(Berberanews)- Maxkamadda gobolka Hargeysa, ayaa maanta xukun ku ridday laba eedaysane oo Ciidammada Booliska Somaliland ku soo qabteen Khamrigii ugu badnaa iyo Xashiishad ee Hargeysa la soo geliyo hadh cad, isla markaana waxay Maxkamaddu amartay in la qobo, ka dibna dab la qabadsiiyo Khamriga lagu soo qabtay.
Maxkamadda Gobalka Hargeysa waxay xukunno ku ridday eedaysanayaal Ciidammada Boolisku ay ku soo qabteen Kkamri iyo Xashiishad ay soo geliyeen magaaladda Hargeysa 17/4/2012, isla markaana waxay Maxkamaddu ku xukuntay midkiiba xadhig dhan muddo saddex sano ah iyo min saddex Milyan oo lacagta shilinka Somaliland ah oo ganaaxa iyo Khamrigii lagu qabtay in lagu gubo goob fagaare ah, kaasoo isla maanta lagu gubay meel biyo-mareen ah oo ku dhaw dhismaha Maxkamadda.
“Edeeysanayashan maanta Maxkamadda Gobalka Hergeysa ay xukuntay, kuwaas oo 17/4/2012 ay Ciidamada Boolisku ay Khamri ku qabteen, waxa magacyadooda la kala yidhaahdaa Cabdirashiid Da’uud Xuseen waxa lagu xukumay 3 sano iyo 3 milyan oo shillinka Somaliland ah oo ganaaxa. Cabdrashiid Ibraahin Xandule waxa isagana lagu xukumay 3 sano oo xadhig ah iyo 3 milyan oo Shillilnka Somaliland ah oo ganaax ah. Waxa isaguna eedeysane ah oo maqan Nuur Cali Seerare. Gadhigii siday Khamriga oo ahaa Marki 2 labarkiisu yahay 33068S/Land, waxaannu ku xukunay 100/5.”Sidaas ayuu yidhi Faarax Mire Cismaan oo ka socday Xeer-ilaalinta Somaliland ee gobolka Hargeysa.
Taliyaha hoggaanka hawlgelinta Ciidanka Booliska Somaliland Maxamuud Ducaaale, ayaa sheegay in Khamrigani uu yahay kii ugu badnaa ee ay qabtaan oo Boolisku, isaga oo xusay in markii hawlgalka Ciidanka ammaanku ku jiray ay ku qabteen Khamrigaas iyo cidda wadatay ay dhawacyo ka dhasheen, sidoo kalena gaadiid ku burburay, isla markaana ay Ciidamada Boolisku gacanta ku dhigeen Khamrigan oo ka yimi dalka Itoobiya.
“Khamrigan waad la socoteen oo waxa uu ahaa khamrigii ugu badnaa ee in muddo ah ay Ciidanka Bilaysku gacanta ku soo dhigaan. Muddo immika laga joogo dhawr iyo toban cisho ayaa Khamrigan waxa xog ka helay Taliyaha Saldhigga Cabdi Iidaan, Ninka la yidhaahdo Axmed waxa uu na soo siiyay warbixintii uu soo maqlay, ka bacdi waxaannu u fadhiisannay halka uu ka soo galayey. Dhul badan ayuu nala jiidhay oo illaa magaalada kooneheeda. Taliska Ciidanka Millateriga Somaliland iyo Xaafadda Gol-jano halka ay Idaacadda ka fuusho ayaannu is caydhsannay.” Sidaa ayuu yidhi Taliyaha hoggaanka hawlgelinta Booliska Somaliland Maxamuud Ducaale.
Waxaanu intaa ku sii daray oo uu yidhi; “Waxa jirtay inuu dhib badan noo geystay oo waxa uu qasaare u geystay Gaadiid Boolisku leeyahay iyo Baabur ay Askarta qaarkood ka dhaceen sidaannu u eryanaynay akhirkii waannu ku gulaysannay inaannu gacanta ku dhigno, halkaas waxaannu gacanta ku dhignay laba eedesane iyo 25 Jirikaan oo midkiiba uu qaado 30 litir. Sidii sharcigu ahaa waxa la keenay Maxkamadda, Maxkamadduna way xukuntay sidii baanay maanta ku soo gaadhay in Khamriga lagu gubo.”
Dhinaca kale, Taliyaha hoggaanka hawlgelinta Booliska Somaliland Maxamuud Ducaale waxa uu sheegay inay ciidammada ammaanku hawlgal ay maanta sameeyeen ku soo qabteen Khamri kale, waxaanu yidhi; “Tallaabo hawlgal kale ah oo maanta Boolisku galay waxay ku soo qabteen 4 Kartoon oo midhkiiba 80 Litir oo Khamriyi ku jiraan, kaasoo laga soo qabtay Xaafadda Shacabka ee magaalada Hargeysa, kaasoo laga soo iibsaday Dalka Itoobiya lagana keenay dhinaca Itoobiya, ahaana Isbiirto ay sameyeen Wershado ku yaalla Dalka Itoobiya. Kolkaa waxaannu shacabka ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo ay naga xoojiyaan oo naga gacansiyaan sidii loo dabar-goyn lahaa Khamriga iyo waxyaabaha la nooca ah ee ay ka mid tahay Xashiishadda iyo daraagiska kale si aanay shacabka waxyeello uga soo gaadhin ayaannu ka codsanaynaa Ummadda reer Somaliland. Marwalna Ciidanka Boolisku waa idiin heegan ee waa inaynu la dagallannaa Mandooriyaha Bulshada wax yeelaaya.”
Previous articleAn Open letter to Ambassador Augustine
Next articleSomaliland Expels a UN staff for violating the country’s code of conduct:-